Iziqubu zokugasela nokuhlasela ziyanda e-Ethiopia - Bayede News
Amasosha avukela umbuso avela esifundeni iTigray adubule imicibisholo esikhumulweni sezindiza enhlokodolobha yase-Eritrea i-Asmara ngeledlule, lokhu kushiwo umholi wawo okuqinisekise imibiko yokuqala kokwanda okukhulu kwempi esiqhubeke izinsuku ezili-12 kuleli lizwe.
“Ukulwa kusaqhubeka ezindaweni ezahlukahlukene kuleli lizwe,” kusho uDebretsion Gebremichael ngesikhathi ekhuluma nabezindaba.
Osomaqhinga abayisihlanu besifunda bekhuluma nabezindaba emveni kwalokhu kuhlasela bathe okungenani kudutshulwe imicibisholo emithathu enhlokodolobha yase-Eritrea ngesonto eledlule. Okungenani emibili iqhume ngqo esikhumulweni sezindiza sase-Asmara. UNdunankulu waleli lizwe uMnu u-Abiy Ahmed wakhipha amasosha ezempi ukuyogasela esifundeni iTigray esisenyakatho yezwe kuyo le nyanga ngemuva kokuthi esole amabutho aseTigray ngokuhlasela amasosha ombuso akuso lesi sifunda esisenyakatho esisemngceleni we-Eritrea neSudan.
UHulumeni wakhe uthe ezombutho zakuleli zwe ziqhubekile ngokuhlasela ngezomoya emizamweni yokubhubhisa imishini kanye nezindlu zokubeka izikhali ezilawulwa abavukeli bamasosha aseTigray.
UGebremichael ethintana nabezindaba ngemiyalezo, ubuye wathi amasosha akhe abelokhu elwa “nezigaba ezili-16” zamasosha ase-Eritrea ezindaweni eziningi kulezi zinsuku ezimbalwa ezedlule. Ekukhulumeni kwakhe akazange alinganise ukuthi mangaki amasosha asatshalaliswe yi-Eritrea kodwa ngokwembiko yezobunhloli base-USA, iCentral Intelligence Agency (CIA), leli lizwe linamasosha ayizinkulungwane ezingamakhulu amabili.
Uthe amasosha ase-Eritrea asengenile e-Ethiopia emadolobheni iBadme, iRama kanye naseZalambessa, okungamadolobha amathathu asemngceleni kulesi sifunda.
“Izwe lethu lisihlasela kanye nezwe langaphandle i-Eritrea. Ukuvukela umbuso lokhu,” etshela abezindaba.
Akubanga nampendulo ephuthumayo eqhamuke kuHulumeni wase-Ethiopia ngesimangalo sokuthi amabutho awo ahlasele i-Eritrea kanye nokunye ukuphawula akwenzile.
UHulumeni wase-Eritrea wona uyazihlangula ekubandakanyeni kule ngxabano ekhona e-Ethiopia kanti iziphathimandla zase-Asmara azitholakalanga ukuba ziphawule ngemuva kwalokhu kuhlasela. Ngeledlule uGebremichael uthe i-Eritrea ithumelele amabutho ukuba aye e-Ethiopia ayoseka uHulumeni kaNdunankulu waleli lizwe kepha akabuvezanga ubufakazi balokho.
UNgqongqoshe Wezangaphandle e-Eritrea, u-Osman Saleh Mohammed, ukuphikile okushiwo nguGebremichael wathi “Asiyona ingxenye yalezi zingxabano”.
Kuzokhumbuleka ukuthi ngeminyaka ye-1998 i-Eritrea ne-Ethiopia baba nempi eyayinzima kakhulu. Kodwa la mazwe asayinda isivumelwano sokuthula noxolo eminyakeni emibili edlule kepha iqiniso lithi uHulumeni kaMengameli wase-Eritrea, u-Isaias Afwerki, usanayo inzondo ebhekiswe kubuholi baseTigray ngenxa yendima lobu buholi obayiklama ngesikhathi sempi.
U-Abiy usola iqembu iTigray Peoples’ Liberation Front (TPLF) okuyilo elilawula lesi sifunda esinabantu abangaphezu kwezigidi ezinhlanu ngokuvukela umbuso kanye nobuphekula futhi uthi umkhankaso wakhe wezempi uzobuyisa ukuthula nozinzo. Wanqoba iNobel Peace Prize ngonyaka wezi-2018 ngemuva kokuhola izingxoxo zoxolo nezwe i-Eritrea.
Inhlangano i-United Nations (UN) ebhekana nababaleki ithe ukulwa okwenzeka e-Ethiopia sekuholele ekutheni abantu abayizinkulungwane eziyishumi nane namakhulu amahlanu babalekele eSudan.